Cheese Grits - Fomba Fanamboarana
inona no mandeha amin'ny sandwich salady akoho
setroka kely mifono fonosana bacons sy crescent
firy kaloria ao anaty casserole an'ny barika cracker
tsy misy mofo fromazy oreo mofomamy ao anaty siny
Cheese Grits dia lovia mamy fanosotra matsiro, aroso tsara miaraka amin'ny tianao any atsimo. Raha mbola tsy nahazo gresy cheesy ianao, (ary ianao dia mac sy fromazy olon-tiana) ho tianao tanteraka ity lovia ity!
Ny cheddar sy dibera voakorontana dia afangaroy ho lasa crème malefaka ho an'ny lovia tsara indrindra. Aroso miaraka amina makamba na ambony miaraka aminy Crock Pot Nisarika kisoa .
Manandrana mahita ny lovia lafatra mety sady matsiro no mora? Ny grity fromazy no valiny mety indrindra!
hametraka makamba na akoho namboarina amin'ity recette grits fromazy ity ho an'ny làlana lehibe matsiro! Aza avela hisakana anao ny fisainana mahazatra, ampiasao ny eritreritrao hanoloana fotoana hafa fisakafoanana!
Inona no atao hoe grits?
Ny grits dia nanomboka an-jatony taona maro lasa izay ary namboarina tamin'ny fikarohanà katsaka mitovy amin'ny hominy na katsaka, ao anaty vato fikosoham-bary. Raha vantany vao nototoina izy dia nasiana lamba iray avy teo amin'ny efijery ary namboarina ho toy ny grit meal (na katsaka) ary ireo vaingan-javatra matevina no mandrafitra ny grits.
Androany, lovia atsimo malaza izy ireo ary raha manandrana azy ireo ianao dia ho hitanao tsara ny antony. Manankarena izy ireo, mahasosotra ary tena matsiro!
Azonao atao ve ny manolo ny tombony amin'ny katsaka? Eny, ao anaty pinch dia azonao soloina fa hanova endrika be ilay izy ary tsy hoheverina ho grits. Ny grits dia manana endrika matevina noho ny katsaka.
Ahoana ny fomba hanaovana grady fromazy
Ny Cheese Grits dia mora atao tokoa! Raha manontany tena ianao hoe inona ny fromazy mandeha amin'ny grits, ny cheddar maranitra na koa ny fromazy Monterey jack dia mety amin'ny grits. Fa raha ny marina, izay fromazy tadiavinao dia handeha!
Omano amin'ny fomba mahazatra ny volanao. Andrahoy ny rano, aloharoina ny grits dia arotsaka.
Arotsaho ny fromazy cheddar maranitra, dibera ary ronono kely mandra-piempo sy fanosotra ny fromazy.
Manompoa eo noho eo!
Inona no hotompoina amin'ny fraomazy fromazy: Mora dia haingana izy ireo manamboatra lovia izay no miaraka aminy tonga lafatra akoho voatono na ataon'izy ireo ny fomba fahandro sakafo maraina tonga lafatra nopetahana atody nendasina na nendasina! Ho tian'ny fianakavianao ny hatsarany, ny hatsarany ary ny haniny mahafinaritra!
Sisy Cheesy misimisy kokoa
Baked Brussel Sprouts Gratin - Tsotra sy matsiro.
Ovy Au Gratin - Mpamaky ankafizin'ny mpamaky!
Zucchini voaendy mora - Super haingana sy mora!
Cheesy Broccoli Cauliflower Casserole (Tsy misy lasopy kambana)
Cheese Ovy Casserole - Mora, cheesy ary mahavariana!
Fotoana fanomanana10 minitra Fotoana fandrahoan-tsakafo18 minitra Fotoana manontolo28 minitra Fanompoana4 servings MpanoratraHolly Nilsson Mora sy mamy, ireo grits ireo no lafatra mety tsara aroso miaraka amin'ny makamba voaendy. pirinty Pin
▢rOA kaopy ron-kena
▢rOA kaopy rano
▢1 kapoaka grits tsy haingana / vetivety na tany ifotony
▢1 ½ kaopy fromazy cheddar voatetika
▢¼ kapoaka dibera
Ento mangotraka ao anaty vilany antonony ny rano, ron-kena akoho ary vovoka tongolo.
Manampia grits ary mahandro tsy misaron-tava mandritra ny 18-20 minitra na matevina sy mamy (na araho ny fotoana voatanisa ao anaty fonosana grits anao).
Esory ny hafanana ary aforaho ny fromazy sy dibera mandra-piempo. (Manampia tsiranoka fanosotra raha tiana).
Raha mampiasa grits ground ground ianao dia araho ny fotoana fandrahoan-tsakafo amin'ny fonosanao soloina rano amin'ny ron-kena akoho.
Kaloria:424,Karbohidraty:32h,Proteinina:14h,Tavy:26h,Tavy mahavoky:16h,Cholesterol:74levitra,Sodium:801levitra,Potasioma:188levitra,Vitamina A:865IU,Vitamina C:8.3levitra,Kalsioma:320levitra,Vy:0.9levitra
Teny lakilegrits fromazy Mazava ho azySakafo an-daniny masakaMalagasy© SpendWithPennies.com. Voaaron'ny zon'ny mpamorona ny atiny sy ny sary. Ny fizarana an'ity fomba fahandro ity dia sady amporisihina no ankasitrahana. Voarara tanteraka ny maka tahaka sy / na mametaka ny fomba fahandro feno amin'ny media sosialy. Azafady mba jereo eto ny politikako momba ny fampiasana sary .
Voaroy misaraka amin'ny voaroy
Reny Jalapeno Cheddar
Casserole paty akoho amam-borona (avy amin'ny Scratch) ary manampy namana!
Resety Halloween sy voatavo lehibe
Manaikitra Apple Pie